Tsvaga nzvimbo dzakakosha muSouth America | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | America, General
South America kana South America ndiyo yekumaodzanyemba subcontinent yeAmerica uye nzvimbo izere nenyika dzekushanyira. Iyo inoumbwa nenyika gumi nenhatu idzo idzo hombe iBrazil uye ine kutsamira kushanu kubva kune mamwe matunhu. Nhoroondo yeSouth America yakafara kwazvo, kunyangwe pano ticha tarisa zvakanyanya pane izvo zvatinoona mune ino subcontinent, sezvo iine nzvimbo dzerunako runoshamisa.
Tichataura newe nezve dzimwe dzenzvimbo dzinonyanya kukosha muSouth America kushanyira. Kutarisa muSouth America kunogona kutitorera kumapoinzi akawanda. Ndokusaka zviri nani kujekeserwa nezve zvatiri kuda kuona uye kuti zviri kupi. Kubva pane inoyevedza nharaunda kusvika kumaguta akanaka uye yakawanda nhoroondo yakatimirira.
1 Rio de Janeiro Brazil
2 Iguazu Falls, Brazil neArgentina
3 Perito Moreno Glacier, Argentina
4 Easter Island, Chile
5 Torres del Paine, Chile
6 Zvitsuwa zveGalapagos, Ecuador
7 Machu Picchu, Peru
Rio de Janeiro ndeimwe yenzvimbo dzinoshanya kwazvo muSouth America, guta rechipiri muhuwandu hwevanhu muBrazil uye inonakidza nzvimbo yekuenda. Ipanema neLeblon Beach inzvimbo yakakosha muguta, pamwe neIpanema nharaunda seimwe yeasarudzika muguta, izere nezvitoro. Asi kana isu tichida kuona chimwe chinhu muguta rino kubva paminiti imwe, iwo ndiwo mahombekombe azere neCariocas achinakirwa nemamiriro ekunze akanaka. Usakanganwe munzvimbo ino kuenda kumusoro kune iyo Mirante de Leblon maonero. Rimwe gungwa ndiro rakakura iri pasina mubvunzo Copacabana, inzvimbo yakanaka yekufamba, kutora dip uye uwane nzvimbo yekudyira yakanaka. Iwe haugone kupotsa kushanya kuCorcovado naiye anozivikanwa Kristu Mudzikinuri, mucherechedzo weRio de Janeiro. Icho chifananidzo chiri 30 metres kumusoro uye kubva munzvimbo ino isu tine panoramic maonero eguta. Zvimwe zvinhu zvatingakwanise kuita muguta kukwira Sugarloaf, dombo kuumbika iro rinowanikwa necable mota, shanyira nharaunda yekutanga yeSanta Teresa nehunyanzvi hwayo hwedhorobha kana kuona nhandare ine mukurumbira yeMaracanã.
Iguazu Falls, Brazil neArgentina
Ichi ndicho chimwe chei Zvinomwe Zvisikwa Zvishamiso zveNyika, zvichiita kuti ive imwe yakakosha poindi muSouth America. Aya mapopoma ari pakati peBrazil neArgentina, pamativi ese munzvimbo dzakachengetedzwa mukati meIguazú National Park muArgentina uye Iguaçú National Park muBrazil. Iyo ine anodarika mazana maviri kusvetuka, iwo mazhinji ruzhinji ari muchikamu cheArgentina. Avo vanoenda kunovashanyira vanogara muArgentina Puerto de Iguazú kana yeBrazilian Foç do Iguaçú. Pamapopoma iwe unogona kutora chikepe kukwira kuburikidza nenzvimbo yepazasi. Kubva kudivi reBrazil kune makuru maonero eepanoramic, kunyangwe mazhinji mafambiro ekutsvaga nzvimbo iyi ari kudivi reArgentina. Isingafanirwe kupotsa ndeye Garganta del Diablo, inova seti yemapopoma ane kuyerera kukuru kwemvura, pamwe neshiri nemhuka dzenzvimbo iyi.
Este glacier ndeyaArgentina Patagonia uye ndiyo imwe yenzvimbo dzayo dzinoshamisa. Iri muGlacier National Park, anenge makiromita makumi masere kubva kuguta reCalafate. Ndiyo chete glacier muPatagonia iyo inogona kushanyirwa kubva kumahombekombe, pasina kuikwanisa neigwa, nekudaro ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye pasina mubvunzo inonyanya kushanyirwa. Iwe unogona kuona chando kubva pamakwara asiwo nechikepe kana nekutora kufamba kwakatungamirwa pagirazi.
Ichi chitsuwa chiri kure chiri cheChile imwe yenzvimbo dzerunako rukuru rwatinopihwa neSouth America Pachitsuwa ichi, chinozivikanwawo seRapa NuiTinogona kushanyira iyo Tahai yakaoma, matongo ekuchera matongo nemapuratifomu mapuratifomu kwatinowana zvifananidzo izvo munhu wese anoziva nezveichi chitsuwa. Asi kune mamwe mapuratifomu emitambo akaita saAhu Akavi kana Ahu Tongariki. Chimwe chinhu chatinogona kuona pachitsuwa ichi chakanaka igomo reRano Raraku kana nzvimbo yekuchera matongo yeOrongo.
Iyi paki yenyika kumaodzanyemba kweChile inzvimbo yeUNESCO biosphere uye imwe yenzvimbo dzakakurumbira muSouth America. Mupaki iwe unogona kuita zvinhu zvakawanda sekukwira kunzvimbo dzinoonekwa, ona Grey Glacier nechikepe, kufamba kana kayaking. Maonero eCuernos del Paine anotipa inoshamisa maonero emakomo aya. Chinhu chakanyanya kukosha pano kunakidzwa nenzvimbo dzisingadaviriki.
Zvitsuwa zveGalapagos, Ecuador
Zvitsuwa zveGalapagos, chitsuwa chePacific chiri cheEcuador imwe nzvimbo inonakidza. Iyo ine gumi nematatu makuru uye matanhatu zvitsuwa zvidiki kuwedzera kune akati wandei zviwi. Mune izvi zviwi tinogona kuona Charles Darwin sainzi chiteshi uye kunyanya mhuka dzinogara dziripo, saka Darwin akawedzera dzidziso yake yeEvolution nekuda kwezvidzidzo zvakaitwa muzvitsuwa izvi. Iwe unogona kuona mamwe mahombekombe uye zvakare kuyambuka akati wandei zviwi pazvikepe nzendo.
Ichi chekare Inca taundi riri muketani cheni yeAndes Ndiyo imwe yenzvimbo dzinotenderera muPeru uye yese yeSouth America. Iyo inzvimbo yekuchera matongo yemutengo wakakura uri pamusoro pezviuru zviviri zvemamita pamusoro pegungwa. Chatinogona kuita pano hapana mubvunzo kushanyira matongo ese kuti uvaone kubva kwakasiyana mapoinzi uye kuti uvazive zvakadzama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » South America